I-STUDIO EDUZE NGESIkhumulo sezindiza esinekhofi YAMAHHALA yase-Colombia
● Indawo emaphakathi enombono omuhle womkhathizwe wedolobha. | Ihhovisi lenxusa laseMelika liqhele ngamaminithi angu-5 futhi isikhumulo sezindiza, iminyuziyamu eminingi, amabhange, izindawo zokudlela, izitolo ezinkulu, izindawo zokuvakasha, isikhungo sezimali, izindawo zempilo yasebusuku kanye nezinto zokuhamba zomphakathi ziseduze kakhulu.
● Inombhede owodwa womshado, isikhala somsebenzi (ideskithophu + isitulo esiphezulu), 49'' I-Smart TV, ikhebula + Netflix ne-inthanethi esheshayo engu-100MB wangempela.
● Ikhofi yase-Colombian YAMAHHALA, itiye, amaswidi nokusanhlamvu kufakiwe. Ikhishi lihlome ngokuphelele.
Ifulethi elibanzi nelizimele ✔ Indawo enelungelo lokuhlala imizuzu emi-5 kude neNxusa Lase-US ✔ Umbono omangalisayo womkhathizwe wedolobha usuka esitezi sesishiyagalolunye ✔ Ngena ngaphandle kwemingcele nokugadwa okuyimfihlo 24/7 ✔ I-inthanethi esheshayo nethembekile ye-100Mb yangempela (WiFi + Ethernet ) ✔ I-Samsung Smart TV engu-1 (amayintshi angu-49) ✔ Ikhishi elihlomele ngokugcwele Ukwehliswa kwemithwalo kuvunyelwe ✔ I-heater ✔ Isevisi ekhokhelwayo yomshini wokuwasha nokomisa ✔ Ibhulakufesi LAMAHHALA (ikhofi laseColombia noma itiye + okusanhlamvu) ✔
Lena enye yezindlu eziyishumi engiziqasha nge-AIRBNB e-Bogotá (hlola iphrofayela yami ukuze ubone ezinye izindawo zami zokuhlala ezweni). Lesi sisitezi sesi-9 ebhilidini LENAMUHLA (Indawo Emaphakathi).
● ISIKHALA SOMSEBENZI: Kuhlanganisa isitulo esiphezulu esinethezeka ukusebenza nedeski elikhulu elinendawo yekhompuyutha ephathekayo kanye nezinsiza zokusebenza. Ungasebenza ngokubuka okuhle kwedolobha futhi ungakwazi ukuxhuma ikhebula le-Ethernet ngqo kukhompuyutha ephathekayo yakho usuka kumodemu/umzila.
● EZOkuzijabulisa: Ama-intshi angu-49 SMART TV aneziteshi ze-HD ezingaphezu kwe-100 + i-Netflix + Prime Video + HBO Max + Disney+ ne-inthanethi enesivinini esikhulu esingu-100Mb wangempela.
● IKHISHINI: Ikhishi eligcwele futhi elinezinto eziningi: Umshini wekhofi, isiqandisi, i-microwave, amapani, izinto zokusika nokunye okuningi. Zizwe ukhululekile ukupheka!
● IBHONASI: Iheater/i-air conditioner 2 amakhethini amnyama amnyama endawo emnyama ekamelweni ngalinye + isikrini samarola sendawo ekhanyayo ikhabethe elikhulu.
● IMIBHEDE ENGEZIWE: Singaphathela abantu abadala umatilasi ophefumulayo kanye/noma umbhede wezingane uma ukubhuka kungokwezivakashi ezingu-3.
● IZINKONZO EZENGEZIWE: Uma usicela, singakuthatha esikhumulweni sezindiza, sikuhlelele ezinye izinsiza zokuthutha, sikushintshise ngemali (iDola lase-US kanye/noma i-Euro), sikuhambise ezindaweni zokuvakasha, sikuwashe (geza futhi somise) futhi /noma unikeze ngekhadi le-SIM laseColombia elinedatha (GB) namakholi.
● I-WALK SCORE: 100/100! (I-WALKER'S PARADISE: Imisebenzi yansuku zonke ayidingi imoto). Uzothola noma yini oyidingayo ebangeni lokuhamba ngezinyawo.
I-Walk Score ikusiza ukuthi uthole indawo ongahamba kalula kuyo. I-Walk Score inombolo ephakathi kuka-0 no-100 ekala ukuhamba kwanoma yiliphi ikheli). I-Walk Score yinkampani ezimele ehlinzeka ngezinsizakalo zokuhamba kalula namathuluzi okusesha amafulethi ngokusebenzisa iwebhusayithi nezinhlelo zokusebenza zamaselula.
● ISELULEKO SAMAHHALA SOMTHETHO KANYE NEZEMPILO YABUSUKU: Njengoba ngingummeli futhi ngisebenza kwezokuzijabulisa, uthola iseluleko sezomthetho esingenamkhawulo mayelana nezindaba zase-Colombia ngesikhathi sokubhuka kanye namathikithi amahhala okuphuma ezindaweni ezidayisa utshwala/kuma-nightclub ahlukene eduze nefulethi.
umbhede oyidabulu engu- 1, imibhede yomoya engu- 1, Umbhede wengane e-1
I-Teusaquillo iyindawo ye-13 ye-Bogotá, inhloko-dolobha yaseColombia. Itholakala enkabeni yedolobha, enyakatho-ntshonalanga yedolobha laseBogotá. Lesi sifunda sihlala abahlali besigaba esiphakathi nesiphezulu. Kuyindawo esemadolobheni enezindawo ezimbalwa eziluhlaza njengamapaki, izindlela, kanye nekhampasi yeNational University of Colombia. Iningi lezakhiwo eziyigugu nezindlu zaseBogotá zikule ndawo. Itholakala endaweni yangaphambili ye-resguardo yomdabu eyaziwa ngokuthi i-Pueblo Viejo (Idolobhana Elidala), eyayikhona kwaze kwaba yisigaba esikhulu sokuya emadolobheni ekhulwini lama-20.
Ngizotholakala kuwena 24/7 nganoma yini ongase uyidinge.
Inombolo yepholisi: 88547